Inkcazo yeFom kwi-Art
Yithini iXesha elithi 'Ifomu' ekubhekiseleleni kwi-Art?
Ifom yegama lithetha izinto ezahlukeneyo zobugcisa. Ifom yenye yezinto ezi sixhenxe zobugcisa kwaye ixela into emithathu ebonakalayo kwindawo. Uhlalutyo olusesikweni lomsebenzi wobugcisa lubonisa indlela iimpawu kunye nemigangatho yomsebenzi ngokuzimeleyo ezizimeleyo zentsingiselo yazo kunye neemvakalelo okanye iingcamango ezingabangelwa kumbukeli. Ekugqibeleni, ifom isetyenziselwa ukuchaza uhlobo lomzimba lobugcisa, njengemifanekiso yesitye, ukudweba kweoli, njl njl.
Xa sisetyenziswe ngetemu ngegama lobugcisa njengendlela yobugcisa , kunokuthetha ityala lokubonakalisa ubugcisa obuhle okanye umgangatho ongahambisani nawo owenziwe kakuhle, ngokufanelekileyo, okanye ngobuchule ukuphakamisa ukuya kumgangatho wobugcisa obuhle.
Ifom yenye yezinto eziyisixhenxe zobugcisa ezizixhobo ezibonakalayo ezisetyenziswa ngumculi ukuba abhale umsebenzi wobugcisa. Ukongeza kwifomu, baquka umgca, umlo , ixabiso, umbala, ukuthungwa kunye nendawo . Njenge-Element ye-Art, ifom ibonakalisa into emithathu-ntathu kwaye ifaka umthamo, ubude, ububanzi, nobude, ngokubhekiselele kwimilo , ebini-ububanzi, okanye i-flat. Ifomu yimilo emigangatho emithathu, kwaye, njengemilo, ingaba ijometri okanye i-organic.
Iifom ze-geometri zifom zeemathematika, ezichanekileyo, kwaye ziyakuthiwa igama, njengamafomu aseJometri: i-sphere, i-cube, i-pyramid, i-cone, ne-cylinder. Isangqa siba yinkalo ngamanani amathathu, isikwere sibe yikhampu, inxantathu iba yipiramidi okanye i-cone.
Iifom ze-geometri zifumaneka rhoqo kwizakhiwo kunye neendawo ezakhiweyo, nangona unokuzifumana kwiindawo zeeplanethi kunye nemibhobho, kunye nefestile ye-crystalline yeeflekhi zeqhwa, umzekelo.
Iifom ze-Organic yizo ezihamba ngokukhawuleza, i-curvy, i-sinewy, kwaye ayinam symmetric okanye ilula okanye ichaneke.
Zivame ukuvela kwindalo, njengemibumba yeentyantyambo, amagatsha, amaqabunga, amaqabunga, amafu, izilwanyana, umntu wabantu, njl., Kodwa ingafumaneka kwizakhiwo ezinesibindi nezengqiqo zomqambi waseSpain u- Antoni Gaudi (1852 -1926) kunye nakwimifanekiso emininzi.
Ifomu ixhomekeke ngokukhawuleza ekubunjweni, kuba i-art-dimensional art and has traditionally consisted almost a fomu, kunye nombala kunye nokubunjwa. Iifom ezintathu-dimensional ziyabonwa ukusuka kwelinye icala. Iifom zenkcubeko zinokubonwa zivela kumacala onke, ezibizwa ngokuba yi-sculpture kwi-injikelezo , okanye ekuphumuleni , ezo zinto zidibeneyo zihlala zixhomekeke kwimvelaphi eqinile-kubandakanywa ukuxhaswa , ukukhulula , kunye nokunceda . Imifanekiso yasemthethweni yenziwa ngomfanekiso womntu, ukuhlonipha iqhawe okanye unkulunkulu.
Inkulungwane yeshumi elininzi kwandise intsingiselo yokwakheka, nangona kunjalo, ukuhambisa iifomu zezithuba ezivulekileyo kunye neveliweyo, kwaye intsingiselo iyaqhubeka isanda namhlanje. Imizobo ayiyiyo kuphela imela, i-static, i-static, iifom kunye nobunzima obukhulu be-opaque obuye benziwe ngamatye okanye bahlotshiswe ngethusi. Ukubunjwa namhlanje kungabonakali, kuhlanganiswe kwizinto ezahlukeneyo, i-kinetic, itshintshe ngexesha, okanye yenziwe ngezinto ezingavumelekanga ezifana nokukhanya okanye ihologram, njengomsebenzi womculi owaziwayo uJames Turrell.
Imizobo inokuthi ibonakaliswe ngokwemiqathango enxulumene neefom evulekileyo okanye ezivulekileyo. Ifomu evaliweyo inesivakalelo esifanayo kwindlela yendabuko yobunzima obukhulu opaque. Nangona izikhala zikhoyo ngaphakathi kwimo, ziqulethwe kwaye zivalelwe. Ifom evaliweyo inokugxininiswa ngaphakathi ngaphakathi kwifom, ngokwalo, ikhethiweyo kwindawo eneendawo. Ifomu evulekileyo iyabonakala, ichaza isakhiwo salo, kwaye ngoko unakho ubudlelwane obunamanzi kunye nobuqili kunye nendawo eneendawo. Isikhundla esibi siyinxalenye ebalulekileyo kwaye isebenze amandla okuvulelwa ifomu elivulekileyo. UPablo Picasso (1881-1973), uAlexander Calder (1898-1976), kunye noJulio Gonzalez (1876-1942) ngabanye abaculi abaye badala ifom evulekileyo, eyenziwe ngetambo kunye nezinye izinto.
UHenry Moore (1898-1986), umculi omkhulu wesiNgesi, kunye kunye nomhla wakhe, uBarbara Hepworth (1903-1975), babengabaluleki ababini baseBrithani ebalulekileyo kwezobugcisa banamhlanje, bobabini bahlaziywa ngokubunjwa ngokuba ngowokuqala ukubetha uhlobo zabo biomorphic (bio = ubomi, morphic = ifomu) imifanekiso.
Wenza njalo ngo-1931, kwaye wenza ngo-1932, echaza ukuba "nokuba inendawo ingaba nefomu" kwaye ukuba "umgodi unokuba nesimo esinjengomzimba obunzima."
Ifomu kwiDraft and Painting
Ukudweba nokudweba , ukukhwabanisa kwefomathi-ntathu kuboniswa ngokusebenzisa ukukhanya kunye nezithunzi , kunye nokunikezelwa kwexabiso kunye nefuthe . Uhlobo luchazwe ngumgca ongaphandle wento, yindlela esiyibona ngayo kuqala kwaye siqale ukuqonda, kodwa ukukhanya, ukubaluleka, kunye nesithunzi ukunika ifom yezinto kunye nomongo kwisithuba ukuze sikwazi ukuyiqonda ngokupheleleyo .
Umzekelo, ucinga umthombo omnye wokukhanya kummandla, ukugqwesa apho umthombo wokukhanya uhlasela ngokuthe ngqo; I-midyali yindleko ephakathi kwendawo apho ukukhanya akukuthi kuthinte ngqo; isithunzi esiyintloko yindawo ekubhekiselele kuyo ukukhanya akuyiyo yonke into kwaye yindawo ebumnyama yecandelo; umthunzi othunyiwe ngummandla kwiindawo ezijikelezayo ezivaliwe ekukhanyeni ngento; ukugqatso okubonakalayo kukukhanya okubonakaliswa phezulu kwizinto ezivela kwizinto ezijikelezayo kunye neendawo. Ngale mi khombandlela yokukhanya kunye nokuthungca engqondweni, naluphi na uhlobo olulula olunokutsalwa okanye oludwetshelwe ukudala ukukholelwa kwefomu elandelanayo.
Uluhlu olukhulu kwixabiso, ngokugqithisileyo ifom ye-three-dimensional iba. Iifom ezenziwe ngexabiso elincinci kwixabiso libonakala liphanga ngakumbi kunezo zenziwe ngokuhluka kunye nokuphambene okukhulu.
Ngokomlando, ukudweba kuye kwaqhubekela phambili kwi-flat representation of fomu kunye nendawo ukuya kumatshini amathathu-dimensional ifom kunye nesithuba, ukukhutshwa.
Umzobo waseYiputa wawusisigxina, kunye nesimo somntu esinikwe ngaphambili kodwa ngeentloko kunye neenyawo kwiprofayili. Ukungaqondi kakuhle kwefomu akuzange kwenzeke kude kube kuhlaziywa kweNkwenkwezi kunye nokufumanisa kwembono. Abaculi bamaBaroque abanjengoCaravaggio (1571-1610), bahlolisise uhlobo lwendawo, ukukhanya, kunye namava amathathu-sithuba sithuba ngokuqhubeka nokusetyenziswa kwe-chiaroscuro, ukungafani okuqinileyo kokukhanya kunye nomnyama. Ukubonakaliswa kwefomu yomntu yaba namandla kakhulu, kunye ne-chiaroscuro kunye nokuzithiba ukunika iifomu ingqiqo yomelele kunye nokulinganiswa kunye nokwenza umdlalo onamandla. I-Modernism ikhulule abaculi ukuba badlale ngefomu engaphezulu. Abaculi abanjengoPicasso, ngokuveliswa kwayo I-Cubism , yaqhekeza ifom ukuthetha ukuhamba ngokuhamba ngexesha kunye nexesha.
Xa uhlalutya umsebenzi wobugcisa, uhlalutyo olusesikweni luhluke kwimixholo yalo okanye umongo. Uhlalutyo olusesikweni lithetha ukusetyenziswa kwemimiselo nemigaqo yobugcisa ukuhlalutya umsebenzi ngokubonakalayo. Uhlalutyo olusemthethweni lungabonakalisa izigqibo ezizimeleyo ezinceda ekuqiniseni umxholo-intsingiselo yomsebenzi, intsingiselo, kunye nenjongo yomculi-kunye nokunika izikhokelo malunga nomxholo wembali.
Ngokomzekelo, iimvakalelo eziyimfihlelo, ukwesaba, kunye nokugqithisa okukhutshwa kwezinye zezona zinto zihlala zihlala phambili, njengeMela Lisa (uLeonardo da Vinci, 1517), Ukudala kuka-Adam (Michelangelo, 1512), iSidlo sokugqibela (ULeonardo da Vinci, 1498) ahluke kwizinto ezisemgangathweni ezisemgangathweni kunye nemigangatho efana nomgca, umbala, indawo, ukuma, ukungafani, ugxininiso, njl., Umculi osetyenziswayo ukudala umzobo kunye negalelo kwintsikelelo, umphumo kunye ikhwalithi engapheliyo.
> Izibonelelo kunye nokuFunda okuqhubekayo
> Ifom , iMyuziyamu yaseTate, http://www.tate.org.uk/art/art-terms/f/form
> Ubugcisa bobugcisa , i-Encyclopedia of Art, http://www.visual-arts-cork.com/sculpture.htm
> Umgodi wobomi , iMusic Museum, http://www.tate.org.uk/context-comment/articles/hole-of-life
> Barbara Hepworth vs Henry Moore , CultureWhisper, https://www.culturewhisper.com/r/article/preview/3670
> Imisebenzi ka-Antoni Gaudi , http://whc.unesco.org/en/list/320
> Henry Moore Foundation , https://www.henry-moore.org
> Barbara Hepworth , https://barbarahepworth.org.uk
> James Turrell , http://jamesturrell.com
> Izibonelelo zootitshala
> Iimpawu zoBugcisa: Ifom, iBakala leNqanaba: 3-4 , Igalari yeSizwe yoBugcisa, https://www.nga.gov/content/ngaweb/education/teachers/lessonsons-activities/elements-of-art/form. html
> Uhlobo kunye neFomu ngoBugcisa: Inkqubo yokuBala kumaBakala K-4 , Isikhokelo sikaTitshala, http://gettingtoknow.com/wp-content/uploads/shapeinartTG.pdf
I-Exhibition Gallery Gallery: I-Royal Tombs yase-Uri
I-Critic yobuGcisa obani abhale ukuHlola kokuQala kweeValto zikaVan Gogh
Yintoni Ubungabonakali Ubungcali?
Iqoqo lisetyenziselwa njani ubugcisa?
Ivelaphi iPaint Distempper?
Umqhubi we-Lowbrow Movement - History History 101
IsiCwangciso seSifundo sokufundisa ukujikeleza nge-10s
Iqhwa liwa! Iqhwa liwa!
Yintoni Isifundo Esikhulu Sijonge Ngaphandle?
Konke Ngeentambo, Ukukhethwa, Amanqwanqwa aMandla, kunye namaNtswana amancinci
Ingqungquthela yeKrisan Cherry
Yintoni Eyongqinela Ngomlingo?
Ewe ngesiFrentshi ngo-Oui, i-Ouais, i-Mouais ne-Si
I-Top 6 ze-John Scofield Albums
I-Owlet Moths, iNew Noctuidae
Iikholesi Ezi-5 Ezibuhlungu Kakhulu Zenkulungwane Ye-19
Izicwangciso zeZiko loRhwebo loHlabathi kunye neMidwebo, ngo-2006 ukuya ku-2015